Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo dacwad lagu soo oogay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo dacwad lagu soo oogay
Guddiga doorashada dadban ee dalka Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble, kadib markii uu faragelin ku sameeyay arrimaha doorashada.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa dhawaan ku dhaqaaqay talaabooyin uu ku bedelay ergooyin beeleed islamarkaana musharixiinta qaarkood uu ka horjoogsaday inay tartamaan halka qaar kale uu taageero siiyay.
Sidoo kale, madaxweyne Cali C/laahi Cosoble ayaa la sheegay inuu si toos ah u farageliyay kuraas ay leeyihiin beelaha, Xawaadle, Baadicade, Gaaljecel, haddana uu sii wado inuu saameyn ku yeesho kuraasta harsan, taasoo keentay inay isku dhacaan guddoomiyaha guddiga doorashada iyo madaxweynaha Hirshabeele.
Guddiga doorashada ayaa ku hanjabay in la hakin doono doorashada Aqalka hoose ee ka socota magaalada Jowhar, waxaana hadda socda waan-waan ku saabsan in madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble lagu qanciyo sidii uu faraha ugala bixi lahaa arrimaha doorashada.
Lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doonno, waxaana weli hakad ku jira doorashada xubnaha Hirshabeele uga mid noqonaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, taas oo dhowr jeer hore uu dib u dhac ku yimid.